२o७५ बैशाख १६ आइतबार
तस्बिर : नासा/मेट्रो युके
उत्तर अमेरिका । मंगलग्रहमा रहेको अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाको क्युरिओसिटी रोभरले खिचेको एउटा पछिल्लो तस्बिरले सबैलाई चकित पारिदिएको छ ।
उक्त तस्बिरमा भुइँमा भेटिएको एउटा ढुंगाजस्तो वस्तुमा महिलाको अनुहार अंकित जस्तो देख्न सकिन्छ । उक्त टाउको प्राचीन योद्धा महिलाको हुनसक्ने भनी आशंका गरिएको छ ।
उक्त वस्तु मध्यकालीन पृथ्वीमा पाइएको हेल्मेट पहिरिएकी योद्धा महिलाजस्तै रहेको शंकालुहरुले विश्वास गरेका हुन् । उक्त वस्तु इजिप्टियन कलात्मक जस्तै देखिन्छ । यसले मंगलग्रहमा कुनै बेला उत्कृष्ट सभ्यता र कलाको विकास भएको हुनसक्ने बताइएको छ ।
मेट्रो युकेबाट अनुदित ।
मंगलग्रहबाट नयाँ सेल्फी खिच्दै क्युरिओसिटी रोभरले भन्यो – म काममै 'बिजी' छु !
काठमाडौं । वैज्ञानिकहरुले झण्डै झण्डै आशा मारिसकेको अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले मंगलग्रहमा पठाएको क्युरिओसिटी रोभर निष्क्रिय नभएको पाइएको छ । उसले मार्सियन माउन्टेन (मंगलग्रहको पहाड) चढ्दै गरेको सेल्फी तस्बिर पठाएसँगै लामो
मानिसलाई मंगलग्रह पुर्याउने यस्तो बन्दै छ एलन मस्कको स्टारशिप
काठमाडौं । स्पेस एक्सका प्रमुख कार्यकारी तथा अमेरिकी अर्बपतिमध्येका एक एलन मस्कले कम्पनीले निर्माण गर्ने स्टेनलेस स्टिल स्टारशिपको प्रोटोटाइपको तस्बिर ट्विटरमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । उनका अनुसार उक्त स्टारशिपले २०१९
मंगलग्रहमा हावाहुरी चल्दा यस्तो आउँछ आवाज, आफैँ सुन्नुहोस् (भिडियोसहित)
काठमाडौं । गत हप्तामात्रै मंगलग्रहमा अवतरण गरेको अमेरिकी अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था नासाको इनसाइट ल्याण्डरले त्यहाँको हावाहुरीको आवाज रेकर्ड गरेको छ । उक्त रेकर्डसँगै पृथ्वीका मानिसहरुले समेत त्यहाँको हावा चल्दाको आवाज पहिलोपटक
मंगलग्रहबारे १० रोचक तथ्य : यस्ता छन् पृथ्वी र मंगलका फरकहरु !
काठमाडौं । मंगलग्रहको बारेमा विस्तृत अध्ययनको लागि नासाले पठाएको इनसाइट ल्याण्डर गत सोमबार उक्त ग्रहको सतहमा पुगेको छ । उक्त यान गत ५ मेमा पृथ्वीबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो । ३० करोड